Nwanyị Nwanyị Nwanyị nke Copenhagen | Akụkọ Njem
Nwanyị Nwanyị Nwanyị nke Copenhagen
Mariela Carril | | Copenhague, Ihe ị ga-ahụ
Onye na-agụghị ma ọ bụ nwere obere obere nzuzu? Ma ọ bụrụ na edebeghị ya na usoro ederede, mgbe ahụ ihe nkiri eserese meriri ụmụaka pere mpe Gutenbergnians. Ruo oge ụfọdụ, Northern Europe anọwo na-enye ekele maka akwụkwọ akụkọ, usoro telivishọn na ihe nkiri ...
Mana ọ bụrụ na anyị emetụ akụkọ ntolite, ọbụlagodi Denmark abụrụla na ndụ anyị obere oge. N'ihi gịnị? Ọfọn, maka akụkọ nke Hans Christian Andersen! Ọ bụ ya dere akwụkwọ Sirenit ahụa, Uwe ejiji ọhụrụ nke Emperor, Snow Queen, Thumbelina na ọtụtụ akụkọ ochie ndị ọzọ. The Little Mermaid bụ otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na Copenhagen kwanyeere ya akpụrụ akpụ.
2 Nwa obere nwa ada na ihe oyiyi ya
Ọ bụ a Onye dere narị afọ nke XNUMX, Danish, onye ghọrọ onye a ma ama na akụkọ ifo ya n'agbanyeghị na ọ bụghị naanị ihe o dere. Na mbu o siiri ya ike itughari akuko nile nke ya nuru dika nwatakiri ma ha enwegh nke oma, ma site n’etiti narutu iri na iteghete akwukwo nke otutu akwukwo akuko na enye ya otuto na ego.
Ọ bụ naanị otu nwa, o nwere nwute nwatakịrị n'oge ọnwụ nna ya, emegburu ya n'ụlọ akwụkwọ ebe o bi dị ka onye na-arụ ọrụ na mgbe ọ nwesịrị ọdịmma ya dị ka onye na-eme ihe nkiri na onye ọbụ abụ, n'ikpeazụ ọ chọrọ ịde. Banyere ndụ ịhụnanya ya, ndị gụrụ akụkọ ndụ ya abịawo kwubie na Hans Enwere m bisexual nakwa na ọ hụrụ ụmụ nwanyị n'anya n'ụzọ ahụ, dị ka ụmụ nwoke, ọ bụ ezie na ọ na-asọ oyi, ikekwe sitere n'okpukpe ma ọ bụ jikọọ ya na mmegbu mbụ ya, maka mmekọahụ.
Andersen malitere ịrịa ọrịa cancer umeji wee nwụọ na August 4, 1874 n'ime ụlọ dị nso na Copenhagen, ma ozu ya dị n'ili dị na ili ozu Frederiksbergs, ya na di na nwunye nwere omume enyi.
Nwa obere nwa ada na ihe oyiyi ya
Akụkọ banyere obere merma bu akuko nke nwa agboghobia mara nma nke choro ibu mmadu. Ọ bụ adaeze nwere ụmụnne nwanyị ise na dịka omenaala si dị mgbe adaeze gbara afọ iri na ise, enye ya ohere igwu mmiri n’elu ala iji hụ ụwa. Nwa obere nwa ada ahu na-etolite ige nti nke akuko umu nne ya ndi mere ochoro ihu uwa mmadu ebe o nuru otutu ihe ebube.
Yabụ, mgbe ọ gbara afọ iri na ise ọ na-egwu mmiri n'elu ala ma ọ bụ oge hụ onye isi mmadụ n'ụgbọ mmiri. Doro anya, Hụbara n'anya. N'ụzọ doro anya, e nwere ajọ ifufe, ụgbọ mmiri ahụ dara wee zọpụta ya. Site mgbe ahụ na obere mamiwota agụụ ya na chọrọ ịghọ mmadụ iji soro ya, ọbụlagodi mgbe mmadụ nwụrụ na mbụ ma nwee ụdị mmetụta ahụ na-emegiderịta onwe ha. N'ihi ya, a gbara ya ume ileta otu amoosu iji nyere ya aka gbanwee ọdụ gị n'ime ụkwụ.
Ọnụahịa ahụ ga-abụ olu gị, ya mere ọbụlagodi na ọ ga-ahụ nwa eze ya ọ hụrụ n’anya, ọ nweghị ike ịgwa ya okwu. Na mgbakwunye, ịga ije ga-afụ ụfụ maka ya na ahụhụ niile a ga-enwe isi ma ọ bụrụ na ọ hụrụ n'anya nwa eze. Ọ bụrụ na nke a emee mgbe ahụ ọ ga - enwe mkpụrụ obi mmadụ, ọ bụrụ na ọ gaghị emecha na - agbaze n'oké osimiri dịka ụfụfụ ya. Ọ dabara nke ọma na ọ na-ezute onye isi ahụ n'agbanyeghị na o nweghị olu, ọ na-agba egwu n'ụzọ magburu onwe ya ma na-achịkwa ya, mana ọ nweghị ihe ga-adị mfe.
Na njedebe onye-isi nwere ọlụlụ di na nwunye ya na ada onye agbata obi ya nke mehiere onye napụtara ya n’oké osimiri ka e nyere ihe niile ka obere nwaanyi ahụ jiri ịhụnanya nwụrụ. Mgbe ahụ, ụmụnne ya nwanyị na-aga chọọ ya ma nye ya mma: ọ bụrụ na o gbuo onye isi ahụ, ọbara ya metụ ya aka, ọ ga-abụ nwanyị ọzọ.
Mana ọ nweghị ike igbu di na nwunye ahụ ka ọ si n'ụgbọ ahụ tụpụ onwe ya, mmiri gbara ya gburugburu ma mgbe anyị chere na ọ ga-agbaze n'ime ụfụfụ ọ bụrụ mmụọ nke ikuku, ya na mkpụrụ obi nke ya, onye ga-enwe ohere ịrịgo Alaeze eluigwe.
E bipụtara akụkọ ahụ na 1837 ma o nweela ọtụtụ mmegharị dịka e mere ya ka ọ bụrụ ihe nkiri, ihe nkiri, anime, ya bụ, animation ndị Japan, na ọbụnadị egwu. Onwe m, enwere m mmasị anime n'ihi na maka mgbanwe, ndị Japan maara banyere ihe nkiri.
Ma gịnị banyere ihe akpụrụ akpụ nke obere mermaid ahụ? E nyere ihe oyiyi a na 1909 site n'aka Carl Jacobsen, otu nwa okorobịa hụrụ ballet nke akụkọ Andersen dere. Ihe nlereanya a bụ onye ịgba egwu nke aha ya bụ Ellen Price na onye ọkpụ ahụ bụ Edvard Eriksen. Ọnụahịa chọrọ naanị ka e jiri ihu ya mee ihe wee gbaa ọtọ bụ nke nwunye ọkpụ ahụ.
Ihe akpụrụ akpụ ọ bụ ọla a kpugheere ya ndị mmadụ n’ọnwa Ọgọst 1913. Ọ nọrọ ebe ahụ ruo 2010 mgbe gọọmentị Danish wegara ya nwa oge na Shanghai Expo. Ruo afọ 2029, ihe oyiyi a bụ nwebiisinka ka akwụkwọ enweghị ike ịme akwụkwọ na-enweghị ikike site na ezinụlọ Eriksen.
Little Mermaid nke Conpenhagen dị na Langelinje ọ gafewokwa otu narị afọ. Na mgbakwunye na ọla, ọ nwekwara granite na eziokwu bụ na na narị afọ ya na elu nke ndụ ọ tara ahụhụ ọtụtụ omume imebisị ihe. E wepụrụ isi ya ugboro abụọ, otu ugboro na ọtụtụ aka agba ya agba. Luckily ọ na-mgbe weghachiri eweghachi ma ka dị, na-anabata ọdụ ụgbọ mmiri nke Copenhagen.
Kedu ihe ọzọ enwere ike ikwu maka Little Mermaid nke Copenhagen? Ọfọn, ụfọdụ ịmata ihe: nata ihe karịrị otu nde nleta kwa afọ nakwa Ọ bụ ihe akacha ese foto na mba ahụ. Ọ bụ ezie na akụkọ Andersen na-akọ banyere otu nwanyị nwere ọdụ nwere otu ọdụ, ihe akpụrụ akpụ nwere ụkwụ abụọ / ọdụ. Enwere mkpụrụ 14 na ụwa, otu na Spain Dị ka ihe ha na-ekwu, ihe akpụrụ akpụ dị n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ abụghị nke mbụ na mpempe akwụkwọ mbụ ahụ dị n'aka ezinụlọ onye ọkpụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Copenhague » Nwanyị Nwanyị Nwanyị nke Copenhagen
Razọ Interrail iji chọpụta Europe